Ampitomboy ny fitaomana haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny Smart Data Tool an'ny Unmetric | Martech Zone
Alatsinainy 9 Febroary 2015 Alatsinainy 9 Febroary 2015 Douglas Karr
Eto amin'izao tontolo izao izay miankina betsaka amin'ny fivezivezena amin'ny tambajotran-tserasera ny ankamaroan'ny fanitarana an-tserasera, ny fanaovana tetika fampahalalam-baovao sosialy mety ho fanamby iray. Saingy ny mety mahavariana amin'ny marketing ara-tsosialy dia mitazona ny orinasa mankany amin'ireo fantsona ireo hisarika ny vinavina ary hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika.
Mifandraika amin'ny fanitarana haingana ny paikadin'ny media sosialy, a Fandinihana 2013 nataon'i Linkedin sy TNS dia manambara fa ny 81% an'ny SMB dia mampiasa ireo tambajotram-pifandraisana ireo amin'izao fotoana izao mba hitarihana ny fitomboan'ny orinasa, miaraka amin'ny 61% amin'izy ireo no mahita tombony lehibe amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao. Na izany aza, hanatsarana ny fahitana ny marika eo amin'ireo mpihaino kendrena, mila paikady ianao fa tsy firariana ary eto no misy Unmetric mitsambikina.
Fiatrehana ny angona manakiana ny paikadin'ny atiny
Unmetric dia data Analytics sehatra izay ny tanjony dia ny fanamafisana ny fisian'ireo haino aman-jery sosialy an'ny marika amin'ny alàlan'ny fanomezana angon-drakitra mifanaraka amin'izany amin'ny fotoana tena izy. Manomboka amin'ny fanaraha-maso ireo lahatsoratra avo lenta ka hatramin'ny famakafakan'ny mpifaninana dia mampiasa metatra marobe ny fitaovana hanangonana ireo angon-drakitra mety ho hitan'ny orinasa manokana fa sarobidy indrindra. Amin'izany fomba izany, ny marika dia afaka manamboatra paikady media sosialy tohanan'ny angona izay manararaotra misarika ny mpanjifa kendreny.
Ny tanjona dia ny hanatsarana ny fizotran'ny tsikera rehetra mifandraika amin'ny famoronana atiny sy ny fametrahana azy mba hahafahana mitarika fitarihana tsy mivadika. Amin'ny fanomezana anao hevitra momba ny karazan-dahatsoratra manosika ny firosoana be indrindra ary mampiseho fifanakalozan-kevitra mifandraika amin'ireo vondron'olona kendrena, Unmetric ahafahan'ny marika hahatakatra ny fihetsiky ny mpihaino azy ary hampiasa an'io fahalalana io hamoronana atiny misy vokany bebe kokoa.
Ahoana ny fiasan'ny Unmetric
Satria ny iray amin'ireo fanamby lehibe eo amin'ny sehatry ny media sosialy dia ny famoronana atiny mahaliana, Unmetric mikasa ny hanamora izany amin'ny fanomezana anao aingam-panahy, famakafakana haingana, ary koa ny fahatongavan'ny lahatsoratra manokana. Ny fizarana Inspire dia mihevitra ireo safidinao efa napetraka ho an'ny orinasa manokana mba hampiseho ny reniranon'ireo lahatsoratra malaza indrindra.
Ny dingana fanampiny dia ny famakafakana mpifaninana, izay ampandrenesin'ny sehatra anao rehefa misy lahatsoratra, sary na horonan-tsary iray manomboka mahazo saina tsy dia mahazatra amin'ny Internet. Manome fotoana eo no ho eo ity resaka ity mba hanatevin-daharana ny adihevitra na hanaraka fotsiny ny fihetsiky ny mpanjifa.
Ankoatr'izay, iray amin'ireo lafiny Unmetric maka ambaratonga vaovao tanteraka dia ny famakafakana ny fandefasana sy ny fandraisana andraikitra izay tokony hatao fototra ho an'ny drafitra amin'ny dingana ho avy amin'ny orinasa. Ny fizarana Highlight dia maneho ny rafitra iray izay mamantatra haingana ireo zavatra na mombamomba izay manintona haingana ny sain'ny olona hahafahan'ny marika hifandray amin'ireo fifanakalozan-kevitra mahazatra rehetra.
Hevitra - Mampitaha - Mamakafaka
Ny fanangonana sy famakafakana angon-drakitra azo ampiharina dia mety ho dingana sarotra hitan'ny orinasa maro ho fandaniam-potoana. Na izany aza, amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy, ny marika dia afaka mamantatra mora kokoa ireo fotoana manan-danja indrindra ary mahatonga ny fizotran'ny fandrindrana atiny sy ny fanatsarana ny atiny tsy ho lany andro. Amin'ny alàlan'ny interface interface intuitive, Unmetric manolotra sombim-baovao manan-danja izay mety manakiana amin'ny fanaparitahana ny fitaomana ara-tsosialin'ny orinasa iray manokana.
Topy maso tsy mihaja
Rehefa dinihina ny fitomboan'ny lanjan'ny famolavolana paikady media sosialy hanintonana ireo mpampiasa kendrena betsaka indrindra dia antenaina hifantoka amin'ireo fantsona ireo ny orinasa kely noho ny teo aloha. Unmetric mikendry ny hitehirizana ny fotoana ilain'ny mpivarotra amin'ny fandrindrana sy fampiharana ny paikadin'ny haino aman-jery sosialy ary ahafahan'ny orinasa maro lasa mpikambana sangany ao amin'ny fiarahamonina media sosialy.
Tags: hamakafaka ny atiny sosialypaikadin'ny atinymamorona atiny mahasarikafanadihadiana amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialy sy paikady atinyfitaomana media sosialysehatra media sosialytsy metrika
Manimba ny haino aman-jery sosialy ny orinasa ara-tsosialy